DOOM3ကိုအချိန်နှင့်အမျှရောင်းချပြီး Mac App Store | ငါက Mac ကပါ
Doom3၂၀၀၄ ခုနှစ်အကောင်းဆုံးဂိမ်းများထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကန့်သတ်ထားသောအချိန်အတွက်ကမ်းလှမ်းထားခြင်းဖြစ်ပြီးပုံမှန်အားဖြင့်စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားသည် 9,99 €နှင့်ယခုရုံ 4,99 € သင့်ပိုင်ဆိုင်နိုင် ငရဲသို့တံခါးများဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြသည်။ ရှေးခေတ် Martian ယဉ်ကျေးမှု၏အပျက်အယွင်းများသည်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုတယ်လီပို့ခြင်းသို့သော့ဖွင့်ပေးခဲ့သည်။ သူတို့သည်ဤကမ္ဘာ့ပြောင်းလဲနေသောနည်းပညာကိုအသုံးမပြုရန် 'Union Aerospace Corporation' (UAC) တွင်ရပ်တန့်သွားလိမ့်မည်။ စက်ရုံအားအကာအကွယ်ပေးရန်စေလွှတ်ထားသည့်အဏ္ဏဝါစွန့်ပစ်ခြင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနှင့်ကျူးကျော်မှုသည်သင့်ကိုမအံ့သြခင်အထိသင်၏တာ ၀ န်သည်အလွယ်တကူရနိုင်သည်။ အခုaစင်ကြယ်သောမကောင်းသောအဆန့်ကျင်မော်ကွန်းတိုက်ပွဲ, သင်နှင့်အတူအဘယ်သူသည်သင်တို့နှင့်အဘယ်သူသည်နားလည်ရန်တိုက်ခိုက်ရမယ်။ ဆက်လက်ဖတ်ရှုပြီးနောက်ငါထား၏ နိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက် နှင့် ဂိမ်းဂိမ်း.
ကျေးဇူးပြု၍ စစ်ဆေးပါ စနစ်လိုအပ်ချက်များဂရပ်ဖစ်ပါဝါသိပ်မလိုအပ်ပေမယ့်ဂိမ်းမဝယ်ခင်က။ ဂိမ်းကိုကျေနပ်လောက်သောစွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့်ကစားနိုင်ရန်အတွက်သင်၏ Mac သည်အနည်းဆုံး system လိုအပ်ချက်များကိုပြည့်မီရမည်။ Processor CPU: Intel Core2Duo / 1,8 GHz / 1GB RAM / HD Space: 2.0 GB / ATI Radeon x1600; NVidia GeForce 7300; 128MB VRam ။
လိုက်ဖက်တဲ့ဗီဒီယိုကတ်ပြားတွေပါNVIDIA GeForce 7300, 7600, 8600, 8800, 9400, 9600, GT 120, 320M, 330M ။ ATI RADEON X1600, X1900, 2400XT, 2600, 3870, 4670, 4850, 5670, 5750, 5770, 5870, 6630, 6750, 6970. Intel HD Graphics 3000 ။
1 Multiplayer လိုအပ်ချက်များ:
3 DOOM3ကို Mac App Store မှတိုက်ရိုက်ကူးယူပါ။
အင်တာနက် (TCP / IP) သို့မဟုတ် LAN (TCP / IP) Play ကိုထောက်ပံ့သည်။
Multiplayer ဂိမ်းသည် broadband connection လိုအပ်သည်။
အရေးကြီးသောကြေငြာချက်အောက်ပါဗီဒီယိုချစ်ပ်များကိုမထောက်ပံ့ပါ။ (GMA 950 Mac Mini (2006,2007), iMac (2006), MacBook (2006,2007), GMA X3100 Macbook (2007,2008), MacBook Air (2008)) ဒီဂိမ်းက Mac OS Extended (စာလုံးအကြီးအသေး) အဖြစ် format လုပ်ထားသော volumes များကိုမပံ့ပိုးပါ၊ ESRB မှအရွယ်ရောက်သူများအတွက်ဤဂိမ်းသည် M ကိုသတ်မှတ်ထားသည်။
တင်ပါတယ်: 15 / 12 / 2011
အရွယ်: 1.56 GB ကို
ဆော့ဖ်ဝဲရေး: Aspyr Media (iDP)
Doom3© 2004-2014 id Software LLC, ZeniMax Media ကုမ္ပဏီ။ မူပိုင်ခွင့်ကိုလက်ဝယ်ထားသည်။
compatibility: OS X 10.6.8 သို့မဟုတ်ထိုထက်နောက်မှ
DOOM3ကို Mac App Store မှတိုက်ရိုက်ကူးယူပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » အားကစားပြိုင်ပွဲ » DOOM3ကို Mac App Store တွင်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရောင်းချသည်